7 akụkọ maka ọnwa nke March. Vargas Llosa, Lackberg, Ibáñez ... | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Egwuregwu, Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
March ga-emepe na oyi, mmiri ozuzo, snow na ifufe, na kwa na mbipụta ederede ọhụrụ. Mgbe niile ntakịrị ihe niile na maka mmadụ niile. Taa, m na-eweta mmetụ ole na ole nke akwụkwọ akụkọ, mpụ mpụ na ihe ọchị. Na ya onwe m m na-na mbipụta mbipụta nke 13, Rue del Barnacle nke onye nkuzi Ibáñez, na m nwere aru nke onye na-atọ ọchị ugbu a. Mana ka anyị lee ndị ọzọ anya.
1 Oku nke ebo - Mario Vargas Llosa
2 Ughtersmụ nwanyị Mmiri - Sandra Barneda
3 Oge nke oké ifufe - Boris Izaguirre
4 Nwanyị Na-acha Uhie Na-acha Uhie - Orhan Pamuk
5 Nwa Ochichiri - Elena Ferrante
6 Onye ojoo - Camilla Läckberg
7 13, Rue del Barnacle. Comprehensive mbipụta - Francisco Ibáñez
Oku nke ebo - Mario Vargas Llosa
Sale taa gaa ụlọ ahịa akwụkwọ ọgụgụ isi autobiography onyinye Nobel maka akwụkwọ Litegas Llosa. Odee dere agwa anyi ọgụgụ nke gosipụtara echiche ya na otu esi ahụ ụwa n'ime afọ iri ise gara aga. Nkọwapụta ndepụta nke ndị na-emesapụ aka nke ahụ nyeere ya aka ịmalite echiche ya mgbe onye nwe akwụkwọ na-enweghị mmasị, nke mbụ ya na Cuban Revolution na, nke abụọ, n'ihi nhapụ ya na Jean-Paul Sartre, bụ onye kpaliri ya kachasị n'oge ọ bụ nwata.
Ya mere, anyị nwere eserese nke Ortega y Gasset, Adam Smith, Karl Popper, Isaiah Berlin ma ọ bụ Jean-François Revel n'etiti ndị ọzọ, ha gosiri ya ụzọ iche echiche ọzọ nke nyere mmadụ ihe ùgwù karịa agbụrụ, mba, klaasị ma ọ bụ oriri ahụ. Na n'elu ihe niile guzo si nnwere onwe ikwu okwu dị ka uru dị mkpa. N'ihi na Fans nke na-ede akwụkwọ.
Mụ nwanyị mmiri - Sandra Barneda
The Catalan odeakụkọ na onye edemede obụp ke akwụkwọ a njem site n'ókèala nke okike na ọchịchọ nwanyị na akụkọ na-ewe anyị 1793 Venice. Ebe ahụ Arabella massari si n'obí ya ọ na-ele mbata nke ndị ọbịa na nnukwu masquerade party ọ haziri.
Otu n'ime ndị bịara ya bụ Lucrezia viviani, ada nke onye ahịa Giuseppe Viviani, onye ya na onye ọlụlụ ya bụ Roberto Manin na-abịa. Ma Lucrezia adịghị njikere ịlụ ya na nwoke ọ kpọrọ asị ma mee ihe niile iji gbochie agbamakwụkwọ ahụ. Arabella ga achoputa na nwa agbogho a ihere bu ahọrọ iji dozie ihe nketa nke ndị a na-akpọ ụmụ nwanyị mmiri, nwanne nwanyị nzuzo nke ụmụ nwanyị na-alụ ọgụ inwere onwe ha.
Oké mmiri ozuzo - Boris Izaguirre
Ndị ọzọ akwụkwọ akụkọ autobiographical, oge a ịchọpụta nke kacha Boris nke nwere ezigbo akụkọ mana dịkwa nro.
Ihe omuma nwata ya dị iche, nsogbu moto ya na mbido ma ọ bụ ụdị omume ya na njirimara ya. Gburugburu ha na-ekwu na nke a emetụtala ụlọ ọrụ ọjọọ Nwatakịrị ahụ gbara nne na nna ya gburugburu, onye ama ama na-agba egwu na onye na-enyocha ihe nkiri. Mgbe ahụ-abịa ụbọchị ụbọchị akwụkwọ ịhụnanya mbụ, ndina n'ike, ịgbachi nkịtị, nzọụkwụ mbụ gị dị ka kọlụm na onye edemede nke telenovelas... Ma emesia ama na España con Martian Ihe E Mere ma bụrụ onye ikpeazụ na Premio Planeta.
Nwanyị Na-acha Uhie Na-acha Uhie - Orhan Pamuk
Ọwọrọetop ewetn̄wed Turkey ada nnyịn a akụkọ ịhụnanya na patricide na Istanbul nke 1980s na aha ohuru a. Na mpụga Istanbul, 1985 nna ukwu nke ọma na nwata ọ na-amụ ọrụ ha goro ịchọta mmiri na ndagwurugwu. Ọ bụ ezie na ha na-egwupụta akụ na-enweghị nnukwu chioma, a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nna na nna, nke ga-agbanwe mgbe onye nọ n’afọ iri na ụma jiri anya ya hụ ihe omimi nwanyị na-acha uhie uhie. Lovehụnanya mbụ a ga-akara ndụ gị. Na gburugburu Istanbul dị ka ihe atụ maka mba na-agbanwe agbanwe na enweghị mgbanwe.
Nwa nwanyi - Elena Ferrante
Ọ kabeghị onye Elena Ferrante bụ. Na n'okpuru nke ahụ Aha nzuzo onye binyere aka na nke a ka na-ezo obere akwụkwọ ebe o na ekwu maka ya mgbagwoju anya na ike gwụrụ ịbụ nne.
Nke a bụ otú akụkọ nke Na-enye, onye nkuzi Bekee gbara alụkwaghịm gbara alụkwaghịm raara onwe ya nye nye ụmụ ya nwanyị na ọrụ. Mgbe ha na nna ga-ebi, kama ịnụ ụtọ ya nostalgia na owu ọmụma na-atụ anya, Leda na-eche na enwere onwe ya ma kpebie iji obere ego ezumike ke ekpri obio ke mbeninyan̄. Ma ụbọchị ndị ahụ dị jụụ gafere mgbe mberede ọ na-esi n'ụsọ osimiri gbapụ nwa bebi na ogwe aka.
Amoosu - Camilla Läckberg
Ikpeazụ aha nke Fjällbacka usoro, onye edemede nke Sweden na-ede akwụkwọ akụkọ mpụ na nke kachasị nke ọma na nke ọma, kamakwa nke akwụkwọ ụmụaka na gastronomy. Okwu ọhụrụ maka Patrik na Erica, na-eduga di na nwunye nke saga.
una 4 afọ girl kpamkpam site n'ugbo dị na mpụga Fjällbacka. Nke a na-echetara ndị bi na ya Afọ iri atọ gara aga ụzọ nke nwatakịrị ọzọ nke achọtara nwụrụ n'oge na-adịghị anya furu efu n'otu ebe ahụ. Abụọ eto eto e boro ha ebubo ma mara ha ikpe maka ịtọrọ mmadụ na igbu ọchụ, ma zere ụlọ mkpọrọ maka ịbụ ụmụaka. Otu n'ime ha, Helen, emeela ka udo dịrị na Fjällbacka na nke ọzọ, Marie, bụ onye na-eme ihe nkiri na-aga nke ọma wee laghachi na nke mbụ mgbe ihe omume gasịrị iji gbaa ihe nkiri.
13, Rue del Barnacle. Comprehensive mbipụta - Francisco Ibáñez
Maka ebumnuche, n'ihi na m mụtara ịgụ ihe na ya na ọtụtụ ndị magburu onwe ha, mụ na onye nkuzi Ibáñez. 13, Rue del Barnacle ọ bụ ikekwe otu n'ime ọkacha mmasị m na-atọ ọchị niile oge. N'ihi owuwu ya, ndị na-akwado ya, edemede ya na eserese ya, bụ ndị mgbanwe ha kwesịrị ịhụ ma nwee.
Ntughari a zuru oke na-ezukọ maka oge mbụ na otu olu peeji niile o mere n'usoro isiokwu a. Kemgbe mmalite ya na 1961, na magazin Uncle Ndụ, ama otoro uko otuowo onyụn̄ akaiso ndinam ntre. Ha bụ ihe odide echefughi echefu nke ndị na-atọ ọchị anyị, kamakwa banyere akụkọ ihe mere eme anyị.
La uche, onye aka ntagide na onye aghụghọ onye na-ere nri, nke onye mbu site n’elu ulo, mgbe nile ka ya na ndi ji ego ya na ese okwu, ndi obi ojoo òké na-eme ụdị obi ọjọọ niile nye ndị na-enweghị obi ụtọ pusi site n'elu ụlọ. Na onye nwe ego ezumike nka na ndị bi ebe ahụ, Nkọwa ụmụaka nke agbata obi ezinụlọ nke ndị ohi, onye bi na siwa, nke onye na-emepụta ihe wacko ma obu the ịkwa akwa, nke vetiran… Na ndị na-efe efe nke steepụ. Ihe niile eserese jupụtara ọchị ma na-akatọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ihe Ibáñez na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » 7 akụkọ maka ọnwa nke March. Vargas Llosa, Lackberg, Ibáñez ...
Nkata Akụkọ: Ọgbọ Ọhụrụ Nke A Na-agụ?